MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardTopup payment for Postpaid Service faqsmm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
၇။ အကယ်၍ ဆားဗစ်နံပါတ် (သို့) အကောင့်နံပါတ် မှားယွင်းပေးဆောင်မိရင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲ ?
နီးစပ်ရာ MPT ငွေလက်ခံကောင်တာများ (TRA) သို့ သွားရောက်ပြီး မိမိ လက်ခံရရှိသော SMS ကို ပြသပါ။
၈။ ငွေပေးချေပြီးသော်လည်း SMS မရရှိပါက မိမိ ငွေပေးချေမှု အောင်မြင်/မအောင်မြင် ဘယ်လိုသိရှိနိုင်မလဲ ?
Call Center 106 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆို၍ လည်းကောင်း၊ နီးစပ်ရာ MPT ၏ ငွေလက်ခံကောင်တာများ TRA တွင် လည်းကောင်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၉။ ငွေပေးချေပြီးပါက ငွေပေးချေသည့် ဝန်ဆောင်မှု၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များပါဝင်သော SMS ကို သုံးစွဲသူ၏ မည်သည့် ဖုန်းနံပါတ်မှ လက်ခံရရှိနိုင်ပါသလဲ။
ငွေပေးချေသည့် ဝန်ဆောင်မှု နံပါတ် ၏ E-invoice လျောက်ထားရယူပြီး အတည်ပြုထားသော သုံးစွဲသူ၏ ဖုန်းနံပါတ် များမှ SMS ရရှိနိုင်ပါသည်။
၁၀။ ဆက်သွယ်ရန်နံပါတ် ပြောင်းလဲချင်ပါက ဘယ်လို ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ ?
၁၁။ ကိုယ်စား ငွေပေးချေနိုင်ပါသလား။ ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ?
၁၂။ ငွေပေးချေရန် အကြိမ်ရေ ကန့်သတ်ထားခြင်း ရှိပါသလား။
Prepaid ငွေလက်ကျန်ဖြင့် ငွေပေးချေပါက တစ်ရက်လျှင် (၅)ကြိမ် အထိ ပေးချေနိုင်ပါသည်။
ငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေပါက အကြိမ်ရေ ကန့်သတ်ထားခြင်း မရှိပါ။
Prepaid ဖုန်း လက်ကျန်ငွေ မှ ဖြစ်စေ(သို့) ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် ဖြစ်စေ ငွေပေးချေမှုအား အချိန်မရွေ:ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း လူကြီ:မင်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုလိုင်းများ ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိစေရန် ငွေတောင်းခံလွှာ စာရွက်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသော နောက်ဆုံးရက်မတိုင်မီ ပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၁၄။ ငွေပေးသွင်းရက် ကျော်လွန် ၍ လိုင်း ဖြတ်တောက်ခံရပါက ငွေသွင်း၍ ပြန်လည်လိုင်းဖွင့်ရာတွင် ပေးသွင်းပြီး အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလျင် လိုင်းပြန်ဖွင့်ပါသလဲ?
သင့်ငွေပေးချေမှုကို အပြည့်အ၀ ငွေပေးချေမှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးပါ။ Call Center 106 သို့လည်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ငွေတောင်းခံလွှာအတိုင်း အပြည့်အ၀ ပေးချေပြီးနောက် လိုင်းပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
လိုင်းအပြီး ပိတ်သိမ်းထားပါက ယခု ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြင့် ပေးချေမရပါ။ အပြီးပိတ်လိုင်းများအား ပြန်လည် အသုံးပြုလိုပါက MPT ကော်မာရှယ် ရုံးများသို့ သွားရောက်ပြီး ပေးသွင်းရန်ကျန်ငွေများအား ပေးသွင်း၍ လျောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ငွေတောင်းခံလွှာပမာဏထက် ပိုမိုပေးဆောင်ပါက ပိုနေသော ငွေပမာဏအား သုံးစွဲသူ၏ ငွေစာရင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
-သုံးစွဲသူမှ အခြားငွေတောင်းခံလွှာများအတွက် ပေးဆောင်ရန်ရှိပါက ပိုနေသော ငွေဖြင့် ပေးချေသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေတောင်းခံလွှာပမာဏအောက် လျော့နည်းပြီး ငွေပေးချေပါက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငွေပေးချေမှု အဖြစ် လက်ခံပါမည်။ သင့်အနေဖြင့် ပေးဆောင်ရန်ကျန်ငွေများအား အလုံးစုံ ပေးချေရန် လိုအပ်ပြီး ပေးဆောင်ရန်ကျန်ငွေပမာဏ မည်မျ နည်းသည်ဖြစ်စေ ငွေပေးချေရမည့်ရက် ကျော်လွန်ပါက လိုင်းယာယီဖြတ်တောက်ပါမည်။
၂၁။Postpaid Service မှ Prepaid Service သို့ ပြောင်းလဲ ပြီး Postpaid Service Account တွင် ပေးရန်ကျန်ရှိသော ကြွေးကျန် များအား ယခုငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအသစ် မှတစ်ဆင့် ပေးဆောင်နိုင်ပါသလား။
မပေးဆောင်နိုင်ပါ။ Postpaid service မှ Prepaid service သို့ ပြောင်းလဲပြီးပါက Postpaid service တွင် ကျန်ရှိသော ကြိုတင်ငွေ (သို့) ကြွေးကျန်များအား ပြောင်းလဲ အသုံးပြုသော Prepaid Service ၏ ငွေစာရင်းအဖြစ် သတ်မှတ် ပေးသွားမည် ဖြစ်သည့်အတွက် Postpaid စနစ် အသုံးပြုစဉ်ကာလ တွင် ကြွေးကျန် ကျန်ရှိနေသေးပါက Prepaid လက်ကျန်ငွေထဲမှ အလိုအလျှောက် ဖြတ်တောက်သွားမည်။